အမှိုက်များကို မီးရှို့၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ရန် ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း သုံးစွဲမည်ဟု လျာထား
ပို့စ်တင်ချိန် - 12/14/2013 12:12:00 PM
ရန်ကုန်မြို့ရှိ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသော အမှိုက်များကို မီးရှို့စက် ၀ယ်ယူမီးရှို့၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးငွေအပါအ၀င် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်က ပြောကြားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ သန်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ သန်းတို့ အကုန်အကျ ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ အမှိုက်မီးရှို့စက် တည်ဆောက်မည့် နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ လှော်ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ တောကျောင်းလေး သုဿာန် အနီးတွင် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း အမှိုက်မီးရှို့စက်ရုံ လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည့် ပမာဏသာ ရရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းစက်ရုံအတွက်သာ အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအနေဖြင့်မူ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နောက်ဆုံးစွန့်ပစ် အမှိုက်ပုံများဖြစ်သော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံနှင့် ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တို့ရှိ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတို့တွင် အမှိုက်မှ တစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရာနှုန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရန် တင်ဒါတင်သွင်းလာသော ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ၄၃ ခု အနက်မှ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်ပကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော CHASSON INTERNATIO NAL Korea Co.Ltd နှင့် ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်တွင်းမှ ZEYA & Association ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်ပမှ HONDI( Korea) ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံရှိ အမှိုက်တန်ချိန် ၈၀၀ မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သုံးနှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမတစ်နှစ် အနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၁၂ မဂ္ဂါဝပ်၊ ဒုတိယတစ်နှစ် အနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့် နောက်ဆုံးနှစ် အနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၈ မဂ္ဂါဝပ်ဖြင့် စုစုပေါင်း တစ်နာရီလျှင် ၃၆ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်ရန် မှန်းထားကြောင်း၊ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံရှိ အမှိုက်တန်ချိန် ၆၀၀ အား နှစ်နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၁၅.၄ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်ရန် မှန်းထားကြောင်း၊ စီမံကိန်း နှစ်ခုစလုံးမှာ ၂၀၁၄ နှစ် ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်အားကို စက်မှုဇုန်များသို့ ရောင်းချမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်ခွင် အမှိုက်များ စွန့်ပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကျော်ထင်))
အိန္ဒိယမှ တည်ဆောက်နေသော စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း ဇွန်လတွင်ြ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကမ်းခြေအတု
မင်းပြားမြို့နယ်မှ အမျိုးသမီးငယ် ၆ ဦး ဆောက်လုပ်ရေ...
ဂျပန်အမျိုးသားတို့ လစာ ၂ ခု ရကြ
27 sea game အဆင့် နှင့် ဆုတံဆိပ်စာရင်း ( ၁၄. ၁၂. ၂...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ လူ ၈ ဦးသေဆုံး
Wisdom Teeth အံဆုံးပေါက်လို့နာတာ သက်သာနည်းများ
ကာချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အလိုကျ အြေ...
ရှုံးရင်လည်း မယိုင်နဲ့ နိုင်ရင်လည်း မကျောနဲ့ ဟု ဆီး...
ဟောင်ကောင်အေဂျင်စီတွေက မြန်မာအိမ်ဖော်တွေကို ခေါ်ယူဖ...
ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​ပြင်​ရေး ​တပ်​မ​တော်​ကို ​ဆန့်​ကျင်​...
အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသော သီလရှင်၏အမှု ကို တရားခံများ အ...
မကွေးမြို့နယ် မြေနုကျွန်းခွဲဝေမှုအား မကြေနပ်ကြ၍ ရွာ...
ပဲမျိုးစုံဈေးကွက် စနစ်တကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန် အရောင်...
မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်မှု စွဲချက်တင်ပုဒ်မကို ပြင်ဆင်...
နိုင်ငံတစ်ဝန်း စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး ရုံးခန်း ၁...
​မင်​ဒဲ​လား ​ဈာ​ပ​န​တွင် ​နတ်​မိ​မယ်​မြင်​ခဲ့​ဟု ​...
မြောက်ကိုရီးယား မတည်ငြိမ်မှု ဒေသတွင်းစိုးရိမ်
The Voice Weekly vol.9 / No.49 (16-Dec-2013)
ရတနာပုံ နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
မြဝတီ နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
ကြေးမုံ သတင်းစာ (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
ငွေတောင်းသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို တိုင်ကြားသော...
စင်္ကာပူမော်ဒယ် ၃ ဦးကို လမ်းပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်
မြန်မာဘီယာကုမ္ပဏီမှ ကုန်ကြမ်းဟုယူဆရသော ဖွဲနုများကြေ...
၂၇ ကြိမ်မြောက် SEA Games ဘောလုံးပွဲစဉ်ဇယား အမျိုးသ...
နိုင်၊ ကျဉ်းများ ဖမ်းလိုက်၊ လွှတ်လိုက် လုပ်နေခြင်းမ...
ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးခန်းများ နှင့် တရုတ်ေ...
ကော့မှူးမြို့နယ် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆိုင်ရာ ဟော...
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကို ထိုင်းမင်းသမီး သီရိဒုံက ဂု...
မီးရှို့အကြမ်းဖက်မှု များကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ရ...
အရက် နှင့် ဘီယာများကို တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် ပြုရန...
အရွယ်မရောက်သေးသော အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်း ...
ကျောင်းသား အဆောင်များကိစ္စ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများအသင...
ပေါက်တော ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှု အိမ်ထောင်စ...
တကောင်း နီကယ်စက်ရုံ EIA /SIA ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြင်းစီးအလှပြိုင်ပွဲမှာ ဆုချီြး...
Focus Online ဂျာနယ် - Life Style, Fashion, Beauty,...
Planet Evening News Sheet သတင်းစာ (13-Dec-2013)
Mizzima Daily News Paper - မဇ္ဈိမ နေ့စဉ် သတင်းစာ (1...
အနုပညာရှင်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်း အင်တာနက်တ...
အမှိုက်များကို မီးရှို့၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ရန် ဒေါ်လ...
ဒီဇယ်ဆီတွဲ ယာဉ်ပေါ်တက် ဆီခပ်ယူသော ရွာသူရွာသား ၂၅၀ က...
အောင်မြင်လိုသူတိုင်း လိုက်နာရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အချက် ...
မြန်မာ-ထိုင်း ဘောလုံးပွဲ လက်မှတ် ပြင်ပပေါက်ဈေး လေ...
ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လာမယ့် မြန်မာနဲ့ထိုင်း ဘောလုံး...
မြန်မာဘောလုံး ပရိသတ်ကြီးအား မြန် မာ နိုင် ငံ ဘောလု...
ထိုင်းအသင်းနဲ့ ကစားမယ့် မြန်မာဘောလုံး အသင်း အခြေအေ...
မြန်မာ့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် စွမ်းရည် ICG သုံးသပ်
ဆင်း နင်းခံရ၍ လူတစ်ဦး သေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အ...
Lenovo မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော Vibe X smartphones များ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံ ဘုရင်နှ...
မြန်မာနှင့် ထိုင်းဘေားလုံးပွဲလက်မှတ် ဝယ်ယူသူများပြ...
ထောက်လှမ်းရေး ပြန်ဖွဲ့သင့်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ...
လမ်းမကိုပိတ်ကာ ခြံခတ်သဖြင့် စစ်ကိုင်း ရွှေမင်းဝံတွင...
ကိုကာကိုလာက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်သိ ရင်းနှီြး...